Aqoonkaab Shirkadda microsoft oo soo saartay computer desktop ah !! | Aqoonkaab
Shirkadda microsoft oo soo saartay computer desktop ah !!
Oct 28, 2016Technology
shirkadda microsoft waxay markii u horreysey taariikhdeeda oo saartay kumbuyuuter desktop ah nooca loo yaqaano All in One . Desktopkan waa mid aad u tayo waxaaanu ka mid yahay qoyska surface oo hore uga koobnaa tablet iyo laptop haddana waxa qoyskaa ku soo biirey desktop ka cusub ee Surface Studio.
kumbuyuuterkan cusub waxa uu leeyahay shaashad cabirkeedu yahay 28-inch taas oo ah mid screen touch ah .waxa uu leeyahay muraayadii ugu khafiifsanyd abid ee desktop yeesho .
computer kan cusub waxa uu ku dhisan yahay maskax da CORE i7 iyo Memory Ram 32 GB ah taas oo ka dhigeysa xawaarihiisa mid aad u sareeya .dhinaca kaydka waxa uu leeyahay 2TB hybrid hard drive .
dhinaca nashqada waxa uu leeyahay u gaar ah kaas oo ah inaad dhaqaajin karto muraayada isla markaa kolba xagasha kugu haboon aad gaysan karto . sidoo kale waxa uu la shaqaynayaa qalinka surface pen.
sanadihii u dambeeyey microsoft waxay xooga saartay dhinaca wax soo saarka qalabka kumbuyuuterada waxanaay soo bandhigtay tablet ka surface pro iyo labtabka surface book hadda waxa ku howlan tahay samaynta moobilka surface phone halkan ka akhriso surface phone marka lagu daro surface studio (kumbuyuuterkan cusub ) waxa ay dhamaystireysaa qoyska surface
Microsoft oo soo saari doonto taleefan cusub !
Previous PostXummadda denge Next PostWaa maxay sanboor